I-China engeyiyo-standard Bearings Abavelisi kunye nabathengi - ishini-shishini - iDihoo Industry.
Ikhaya > Iimveliso > Iimpahla eziqhelekanga
I-RIHOO ngumvelisi waseTshayina weebhanti ezingaqhelekanga, ukubonelela ngeembalo ezingekho phantsi kweemilinganiselo ezichanekileyo kunye nezinto eziphathekayo, kwaye unakho phantsi kweemfuno zabathengi ukuzisa izisombululo kwi-design yokwenza. Senza isitokethi kwimveliso ethile ekhethekileyo-i-bear-standard bearings, nokuba uyayidinga inani elincinci, nathi sinokukunika ixesha lokunikezela ngokukhawuleza.
Ukukhutshwa kweeNdleko zeeNdleko zeZKLF
Oku kulandelayo malunga ne-Screw Mounting Bearings i-ZKLF Series series, ndiyathemba ukukunceda uqonde kangcono ukuyiqonda kakuhle i-Screw Mounting Bearings zeZKLF Series.
I-Axial I-Angular Ball Bearings ZKLN Series
Oku kulandelayo malunga ne-Axial Ibhola yeBhola yoNxibelelwano yeBhola i-ZKLN Series, ndiyathemba ukukunceda uqonde ngakumbi i-Axial Ibhola yeBhola yeeNkcukacha ze-ZKLN Series.
Iimpahla zeMigroidery Bearings
Oku kulandelayo malunga neMigodi yeMigroidery Bearings edibeneyo, ndiyathemba ukukunceda ukuba uqonde kakuhle i-Embroidery Machine Bearings.
Iibherelo Ngendandatho Ephakathi
Oku kulandelayo malunga neenqwelo kunye ne-Ring Enner Extended Ring, ndiyathemba ukukunceda ukuba uqonde kakuhle ii-Bearings With Ring Ring yangaphakathi.
Iibherelo Nge-Inner Hole ye-Eccentric
Oku kulandelayo malunga neenqwelo ezihamba kunye ne-Eccentric Inner Hole edibeneyo, ndinethemba lokukunceda ukuba uqonde kakuhle ii-Bearings Nge-Eccentric Inner Hole.
Imishini yokuThengisa iMishini
Oku kulandelayo malunga neMigangatho yeeMpahla zeMpahla, ndiyathemba ukukunceda ngokucacileyo ukuqonda iMpahla yeeMpahla zoTytile.